Fisamborana depiote : Azo atao raha tra-tehaka ambodiomby -
AccueilRaharaham-pirenenaFisamborana depiote : Azo atao raha tra-tehaka ambodiomby
Fisamborana depiote : Azo atao raha tra-tehaka ambodiomby
18/04/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Mbola tsy nisy hatramin’ izao ny fangatahana notanterahin’ ireo solombavambahoaka mpanohitra izay mikasa hanatanteraka hetsika ny sabotsy ho avy izao etsy amin’ ny lapan’ny tanàna raha ny tatitry ny préfen’ ny tanànan’Antananarivo taorian’ ny fivoriana izay notanterahin’ ny OMC izay miandraikitra ny filaminan’ny tanàna omaly. Noho izany raha toa ka tsy misy ny fangatahana alalana, na ihany koa tsy fahazoana alalana hanatanteraka hetsika, dia efa misy izany ny tsy fandikan-dalàna, indrindra moa raha misy ny fihoaram-pefy. Noho izany dia nanambara ny préfen’ny tanànan’Antananarivo fa tsy tokony hihanoka ao ambadiky ny tsimatimanota ireo solombavambahoaka, satria raha misy ny fandikan-dalàna amin’ io fotoana io dia mihatra ny lalàna satria dia ambodiomby no hahatratrana izay manakorontana sy mitarika korontana. Raha tsiahivina moa io andinin-dalàna io dia mazava fa raha misy ny fahatratrana ambodiomby, dia tsy mihatra ny tsy mahamaty manota ny olomboafidy iray. Noho izany tsy ilaina intsony fiantsoana ny birao maharitra amin’ny fananganan-tanana hanalana ilay zo hananan’izy ireo. Nandritra ny fanazavana na ny tatitra moa dia nanambaran’ ny préfet n’ ny tanàna fa ny hetsika rehetra izay hiantsoana vahoaka na andalam-be, dia tsy maintsy hangatahana alalana avokoa izany dia dimy andro alohan’ ny daty voafaritra hanatontosana ilay fiantsoana na ny hetsika.
Manoloana io zava-misy io moa dia nanamarika ny préfet n’ ny tanàna Angelo Ravelonarivo fa tsy resaka tatitra velively no tanjon’ ny solombavambahoaka amin’ io sabotsy io, ary ny tatitra izay tanterahin’ izy ireo moa dia zony tanteraka, saingy kosa any amin’ ny distrika nahalany azy ireo no tokony hanatanterahana izany. Niresaka mikasika ny mety ho fikasana ratsy amin’ ny hetsik’ireto solombavambahoaka ireto ihany koa ny préfet en’ ny tanàna, indrindra mety fisiana eritreritra ratsy io ihany amin’ ny mety famaizan’ny lapan’ ny tanàna “ tsy ny ben’ ny tanàna ankehitriny no nanorina indray ny lapan’ ny tanàna. Asa tanan’olon-kafa io. Anjaran’ilay nanorina anefa no tokony ho tonga saina raha hanaiky hanatanterahana hetsika manoloana ny lapan’ny tanàna izy ireo” raha nanao sarisarin-teny ny préfet n’ ny tanàna. Hevitra izay miantefa amin’ ny Andry Rajoelina moa io, izay efa 40 taona aty aoriana vao nahavita indray nanorina io vakoky ny tanàna io.
Mikasika kosa ny fahazon-dalana izay nomen’ ny kaominina, dia nitondra fanazavana teknika ny préfet n’ ny tanàna Antananarivo. Nohazavainy tamin’ izany fa mikasika io fahazon-dalana avy amin’ ny kaomina io dia izy ireo no tompon’ny toerana, noho izany rariny raha misy io fangatahana io, ny fahazoan-dalana azon’izy ireo noho izany dia fahazon-dalana momba ny toerana. Izany rahateo izay tsy ampy raha toa ka hanatanteraka hetsika , satria mbola ilaina ihany koa ny fahazon-dalana hafahana manatanteraka ny hetsika izay ny prefektiora no mamoaka izany. Noho izany raha toa tsy misy io fahazon-dalana io, dia tsy ara-dalàna izany ny hetsika. Noho izany ireo mpitandro filaminana izay tarihin’ ny préfet n’ny tanàna izany hoe ny OMC dia hihodidina io toerana eo Analakely io, ary nanamafy ny préfet n’ ny tanàna Angelo Ravelonarivo fa hidina eny an-toerana hitarika ny fitandroana ny filaminana ny tenany. Teny ampamaranana moa dia gaga ihany ny préfet n’ ny tanàna hoe tao anatin’ ny efa-taona fahanginana dia hitondra tatitra indray ireo solombavambahoaka, raha maniry mafy anao izany anefa izy ireo, ary efa nandritra ny repoblika faharoa dia efa misy ny trano ao amin’ ny prefektiora natokana hanatanterahina izany.
Fiaraha- miasa amin’ny Zambie : Tombontsoa ho an’ny firenena malagasy
Fotoana fohy taorian’ny fahatongavan’ny filoha Hery Rajaonarimampianina sady filohan’ny Comesa tao Lusaka dia avy hatrany dia noraisin’ny filoha zambianina, Edgar Lungu ny tenany narahin’ny fifanatrehana. Niompana tamin’ny fifanarahana lasitry izay nosoniavina tamin’ny taona 2008 ny ...Tohiny
Lozam-pifamoivoizana tany Ankazobe : Noraisin’ny fitondram-panjakana ny fikarakarana rehetra
Houcine Arfa : Karohana any Frantsa
Andron’ny manamboninahitra : Hamafiso ny firaisan-kina sy ny fanompoana firenena hoy ny Filoha
MAPAR sy TIM : Mpanao sorona fiainam-bahoaka